Yuusuf Dabageed oo macaash ka raadinaya dhiigga shacabka Hiiraan | KEYDMEDIA ONLINE
Yuusuf Dabageed oo macaash ka raadinaya dhiigga shacabka Hiiraan
Yuusuf Axmed Hagar, oo ka mid ahaa daba-qoodhiyadii caanka ahaa ee Gobolka Hiiraan ku soo hoggaamin jiray ciidanka Itoobiya ayaa lagu eedeeyay inuu macaash ka raadinayo dhiigga shacabka.
Baladweyne, Soomaaliya – Qaar ka mid ah bulshada Baladweyne ayaa sheegay in ku simaha Madaxweynaha ahna Madaxweyne Ku Xigeenka Dowladda Hirshabeelle, Yuusuf Axmed Hagar, oo loo yaqaaan Dabageed, uu dhiigga shacabka Hiiraan u daadiyay shir aan muhiim ahayn kaas oo xitaa ka dhici karay aaladda fogaan aragga ee ZOOM-ka loo yaqaan.
Xarunta Gobolka ee Baladweyen, waxa xalay lagu miray dagaal, kaas oo mar kale saaka lagula soo jarmaaday, waxaana qasaaro xooggan oo naf iyo maalba leh loo geystay shacabka danyarta u badan ee ku dhaqan magaalo madaxda, kuwaas oo aan xitaa heli Karin adeeg buuxa oo caafimaad.
Hogaamiyaha jabhadda la magac baxday Kacdoonka Gobolka Hiiraan, Jeneraal Abuukar Xaaji Warsame,’ Xuud’ wuxuu hore u caddeeyay mowqifkiisa ku aaddan maamulka ay Kooxda Farmaajo qasabka uga dhiseen Hirshabeelle, wuxuuse ogolaaday in Dabageed uu nabad ku joogo Baladweyne.
Hayeeshee, Madaxweyne Ku Xigeenka Maamulka ayaa ku adkeysatay in Shirka Wadatashiga Golaha Wasiirrada Maamulka Hirshabeelle, lagu qabto magaalada taas oo sababtay dagaalka shacabku ku waxyeelloobay.
Shacabku waxa ay ku doodayaan in shirka dhiigga loo daadshay uu ahaa mid laga baaqsan karay, oo xilligaan aan waxba ku soo kordhin karin Hiiraan iyo guud ahaan Maamulka, waxayna Yuusuf Dabageed, ku eedeeyeen inuu macaash ku raadinayo dhiigga shacabka.
Hagar, wuxuu ka mid ahaa koox laga soo abaabulay Madaxtooyada Soomaaliya, oo kuraasta Hirshabeelle loo boobay doorashadii dhaweed, wuxuuna hadda u muuqdaa inuu fulinayo amaro ay soo fareen Kooxda Farmaajo